author2- December 19, 2019
Phones author3- October 20, 2019
Huawei Mate 30 Pro ကိုတော့ ဗားရှင်း ၂ မျိုးနဲ့ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ 5G နဲ့ 4G model ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ် ၂ မျိုးလုံးမှာ 6.53-inch Flex OLED display ဖြစ်ပြီး 2400 x 1176 resolution...
Phones author2- January 23, 2020
စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများ လူတန်းစားမရွေး ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ Huawei ဖုန်းအမျိုးအစား တွေထဲကမှ Flagship ဖုန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ P20 Pro နဲ့ P20 Lite ကို ဒီတစ်ပတ်မှာ လေ့လာကြရအောင်။ Huawei P20 Pro မှာ 6.1" display နဲ့ 1080 x 2240 resolution ပါဝင်ပြီး...
Phones author 1 - December 10, 2019
မကြာမီက မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်ထဲကို စတင်ရောက်ရှိလာတဲ့ Samsung Galaxy A20s ဟာ ဒီဇိုင်းပုံစံ ရိုးရှင်းလှပပြီး အရည်အသွေးလည်း မြင့်မားပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ သုံးနိုင်ပြီး Single SIM နဲ့ Dual SIM ဆိုတဲ့ version2မျိုးကို ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။...
Samsung Galaxy A10s ကတော့ Samsung ရဲ့ budget phone တစ်လုံးဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းအရရော စွမ်းဆောင်မှုအရပါ အဆင်ပြေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 156.9 x 75.8 x 7.8 mm ရှိပြီး 168g လေးပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, SPA နဲ့ LTE networks...
Phones author 1 - January 6, 2020
မကြာသေးမီက ထွက်ရှိထားတဲ့ HONOR 9X ဟာ စျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာသုံးနိုင်ပြီး Hybrid Nano Dual SIM စနစ်ကို ပံ့ပိုး ပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 163.5 x 77.3 x 8.8 mm ရှိပြီး ...
ဇူလိုင်လလောက်က Xiaomi Mi CC9 နဲ့အတူ စျေးနှုန်းပိုမိုသက်သာတဲ့ Xiaomi Mi CC9e ဆိုတဲ့ version အနည်းငယ်ပိုနိမ့်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ GSM, CDMA, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Nano Dual SIM စနစ်ကို ထောက်ပ့ံပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်က 6.01-inch...
Phones author2- February 17, 2020